Ugxeke ukubulawa kwabesifazane - Ilanga News
Home Izindaba Ugxeke ukubulawa kwabesifazane
Ugxeke ukubulawa kwabesifazane
INKOSI Mangosuthu Buthelezi ikufanise namanyala ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane
nezingane. ISITHOMBE NGU: SANDILE MAKHOBA
ukulinyazwa nokubulawa kwabesifazane nezingane, yakufanisa namanyala iNkosi Mangosuthu Buthelezi engundunankulu kaZulu ngesikhathi ikhuluma nezintombi,
eMkhosini woMhlanga ngoMgqibelo, obusesigodlweni seSilo uZwelithini, eNyokeni, KwaNongoma.
Nakulo nyaka lo mcimbi uqhubeke kahle, kanti okuqaphelekile wukushesha kwezinto
njengoba kushaye ihora lesihlanu sekuphele cishe yonke into, nezikhulumi seziqedile.
INkosi Buthelezi ihlaba indaba yokubulawa kwabesifazane nje, kuzokhumbuleka ukuthi
ngeledlule iNingizimu Afrika inyakaze yonke emuva kwezigameko ezahlukene lapho kubulawe khona u-Uyinene Mrwetyana (19) obengumfundi wase-University of Cape Town, ogcine ukubonakala kade eye eposini.
Kulesi sigameko kuboshwe umsolwa oyedwa, okuvele ukuthi uyisisebenzi sakhona eposini.
Kakugcinanga lapho, kuvele indaba kaMnu Sibusiso Mpungose (44) obulale izingane zakhe
ezine, okusolakala ukuthi ubecasulwe yindaba yokwehlukanisa kwakhe nomkakhe.
INkosi Buthelezi izigxekile lezi zigameko, yathi kubulawa abantu okumele ngabe bayavikelwa.
“Kungizwisa ubuhlungu ukwazi ukuthi lo Mkhosi woMhlanga wenzeka ngaphansi kwefu lodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane, izinga lalo eselikhuphuke lalemboza lonke izwe lakithi. Kuyimanje kasisakwazi ukuhlangana ngaphandle kokuba sikhulume mayelana nalobu bubi, ngoba buthatha impilo yalabo esinikezwe umsebenzi wokuba sibafukamele.
“Kalisapheli isonto kungekho umuntu wesilisa obulele owesifazane, kwesinye isikhathi nezingane ngisho ezivela okhalweni lwakhe umlisa owenza la manyala.
Nakhu Silo abantu bakho bephenduka izimpisi phambi kwethu!” kusho iNkosi Buthelezi.
Iveze ukuthi nangesikhathi yehla esikhundleni sokuba ngumengameli we-IFP, yawudlulisa
umyalezo wokuba kuvikelwe abesifazane nezingane.
“Iningi lenu lizokwazi ukuthi kakukudala ngehlile esikhundleni sokwengamela Inkatha
yeNkululeko, iqembu engilihole iminyaka engu-44 eyedlule.
“Njengoba ngangilungisela ukwethula inkulumo yami yokugcina eqenjini njengomengameli
walo, ngaba nomuzwa ongiphoqayo ukuba ngiwunikezele okuyigunya lokugcina ukunxusa
okokugcina eqenjini lami.
Kwaba yilona umyalezo wami; ‘Vikelani abantu bakithi besifazane nezingane zethu,” kuphetha iNkosi Buthelezi.
Previous articleKUQHUME ISILILO KUGWETSHWA UBEN 10 NGOKUBULALA ISALUKAZI
Next articleBekunosizi kufihlwa izingane ezibulewe